Guardiola Oo Raalligelin, Sharraxaad Iyo Yididiilo Kaga Jawaabay Guul-Darradii Chelsea
HomeWararka MaantaGuardiola Oo Raalligelin, Sharraxaad Iyo Yididiilo Kaga Jawaabay Guul-Darradii Chelsea
Tababaraha kooxda Manchester City, Pep Guardiola ayaa raaligelin ka bixiyey kaadhadhkii Casaanka ahaa ee ay qaateen Sergio Aguero iyo Fernandinho, kulankii guul-darrada lama filaanka ah ee 3-1 ay Chelsea u xambaarisay City.
Aguero ayaa kaadh cas loo taagay daqiiqaddii u dambaysay ee ciyaarta markii uu khalad ku galay difaaca Chelsea ee David Luiz, isla daqiiqaddaasna waxa dagaallamay Fernandinho oo kaadhka cas loo dhiibay markii uu Cesc Fabregas cunaha qabtay.
Haddaba, tababare Pep Guardiola ayaa ku sifeeyey khaladaadka ciyaartoygiisu sameeyeen mid laga xumaado oo aanay cidina jeclayn, waxaanu yidhi: “Waa wax laga xumaado in aanu ciyaarta ku dhamaysano sidan oo kale. ma jecli, raalligelin ayaanan ka bixinayaa wixii dhacay.” Sidaas ayuu yidhi.
Isaga oo hadalkiisa sii wata, waxa uu Guardiola yidhi: “Fernandinho Wuxuu doonayey in uu difaaco saaxiibkii, ama wixii ay kooxda naga soo horjeeddaa ku samaysay Aguero. Markii Nolito uu sidan oo kale sameeyey kulankii Bournemough, casaan ayaa la siiyey iyo saddex kulan oo ganaax ah. Waa sababta uu Fernandinho u doonayey in uu difaaco saaxiibkii. Kalamaan hadal weli wixii uu sameeyey, haddii Tv jiro, waanu wada daawan doonaa.”
Fernandinho ayaa la kulmi doona ganaax saddex kulan ah, halka Aguero uu afar ciyaarood oo ganaax ah ku seegi doono kulamo badan oo muhiim u ah koxdiisa, isagoo dhowaan uun ka soo laabtay ganaax uu ku mutaystay anshax xumo uu kula kacay difaacyahanka West Ham ee Winston Reid bishii August.
Labadan ciyaaryahan ayaa seegi doona kulamada Leicester, Watford iyo Arsenal, halka Fernandinho uu soo laaban karo kulanka Hull City ee December 26, laakiin Aguero ayaa garoomada ku soo noqon doona kulanka Anfield ay Liverpool ku soo dhoweyn doonto Manchester City sannadka cusub bilowgiisa.
Taageereyaasha Manchester City iyo ciyaartoyga qaarkooda ayaa la sheegay inay ka cadhoodeen go’aamo uu ka qaatay garsoore Anthony Taylor xurguf qaybta hore dhex martay Luiz iyo Aguero, kuwaas oo tirsanayey in David Luiz ay ahayd in kaadh la siiyo.
Si kastaba ha ahaatee, Guardiola ayaa diiday inuu eedeeyo Taylor waayo waxay ahayd guuldaradii ugu horeysay ee Etihad Stadium tan iyo markii uu qabtay City xagaagii.
“Waxaanu u guuleysan weynay sababtoo ah waxaanu luminay fursado badan, sababtoo ah go’aanada garsooraha” ayuu hadalkiisa raaciyay tababaraha reer Spain.
“Waxaan ku hanweynahay kooxda iyo sida aan u ciyaarnay – Waxaan halkan u imid in ciyaartoygu ay isku dayaan in ay u ciyaaraan sida aan u ciyaaray kulankan oo kale.”
Si kastama ha ahaatee, Guardiola ayaa waxa sugaya kulamo muhiim ah oo isugu xiga, kuwaas oo uu ku khasban yahay inuu guulo ka keeno, si uu u xaqiijiyo in uu kasii mid ahaado kooxaha ku tartamaya horyaalka.
Van Gaal: Martial Waxa Iibkiisa Igu Khasbay Giggs
Manchester United vs Manchester City 1 – 2 – All Goals Highlights